Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGuam Breaking » Ikhefu kunye noGonyo eGuam kubakhenkethi baseTaiwan
isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGuam Breaking • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
Kukho uluhlu olude lokulinda eTaiwan ukuze abantu bafumane iyeza lokugonya le-COVID-19. Ukuya eholideyini kummandla wase-United States iGuam iya kubandakanya iyeza lokugonya, iilwandle ezintle ezikweleenjiko, kunye nencasa ekhethekileyo yomoya weHafa Adai.
Yaziwa njenge “Umoya V&V” ye "iholide kunye nokugonywa," kubandakanya idosi yokuqala yesitofu sokhetho, enokubakho ngokudubula okwesibini ukuba abakhenkethi bahlala kumhlaba wase-United States ixesha elaneleyo.
Inzala kuhambo olwenziwe emva kokuba urhulumente waseGuam ephelise imfuneko yokuvalelwa yedwa kubakhenkethi abakwaziyo ukubonisa uvavanyo lwe-PCR olubi kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kwenqwelomoya.
Itshatha yomoya ye-EVA, iAirbus A321-200, yenye yeenqwelomoya ezininzi ezilungelelaniswa ziiarhente ezahlukeneyo zohambo lwaseTaiwan, ezinjengeLion Travel kunye nePhoenix Tours. Ngaphezulu kweendwendwe ezingama-2,000 XNUMX ezivela eTaiwan kulindeleke ngeenyanga zikaJulayi nango-Agasti.
I-Guam Visitor Bureau (GVB) kunye ne-AB Won Pat International Airport Authority zamkele uhambo lokuqala oluya ngqo eGuam ukusuka eTaiwan ngaphezulu konyaka onesiqingatha. Inqwelomoya ye-EVA yetshathi yenqwelomoya yathwala abakhweli abali-153 baya esiqithini ukuba bathathe inxaxheba kwinkqubo yezokhenketho yokugonya yaseGuam- iAir V&V.
Ngaphezulu kweendwendwe ezingama-2,000 ekugqibeleni ziya kuhamba zisuka eTaiwan ziye eGuam ukuze zigonywe kwaye zizonwabele ngeholide ngexesha elinye.
Abakhenkethi baseTaiwan babuyela eGuam
"Esi sisiqalo nje sokuvuselelwa kweshishini lokuqala likaGuam," utshilo uMongameli we-GVB kunye ne-CEO uCarl TC Gutierrez. "Ndinqwenela ukubulela iRhuluneli uLou Leon Guerrero ngokuxhasa inkqubo yeAir V&V, enika abatyeleli ithuba lokugonywa kwaye bafumane nomoya wethu weHafa Adai."
I-GVB ibonelele ngamanzi anebhotile kunye nococeko lwesandla kubagibeli njengoko besendleleni yokufudukela kwiSebe lezeMpilo noLuntu (DPHSS). Abakhweli babemkelwe ngomculo ophilayo waseChamoru nguRuby Santos noJesse Bais.
"Ndifuna ukuqaphela intsebenziswano enkulu phakathi kweOfisi yaseGuam Taiwan, i-EVA Air, kunye namanye amaqabane orhwebo kwezohambo ekwenzeni lo moya wenqwelomoya ube yimpumelelo," utshilo uMlawuli we-GVB weNtengiso yeHlabathi uNadine Leon Guerrero. "Sifuna ukubulela iGuam International Airport Authority, iGuam Customs and Quarantine, amapolisa kwisikhululo seenqwelomoya, kunye neMpilo yoLuntu ngentsebenziswano eqhubekayo yokwamkela iindwendwe kwesi siqithi sihle."